Tinye n'ọrụ Ahịa Prioritization Ugboro abụọ Gị Outbound Sales tọghatara | Martech Zone
Anọ m na-akparịta ụka n'izu a na SaaS CEO bụ onye na-agba mbọ ịgba ụgwọ ọrụ bara uru. Ọ bụ ezie na ha na-akara ma na-ebute ụzọ ha na-ebute ụzọ, ndị otu anaghị adịkarị mfe ịkpọtụrụ ndị na-eduga ha na oku ha na-ebute ya dị egwu. Ọ na-ewe ụdị onye ahịa pụrụ iche iji kpọọ oku 70+ kwa ụbọchị, mana nke ahụ bụ kpọmkwem ihe mbido chọrọ ma ọ bụrụ na ọ nwere olile anya ịchụ ahịa zuru oke iji nye nri uto nke ọma.
Offọdụ n'ime okwu a na ndị ahịa na-adịghị arụpụta ihe bụ na ha enweghị nhazi nke etinyebere na usoro ha yana ndị otu ha ga-arụ ọtụtụ ọrụ ma rụọ ọrụ site na mkpa ha. Nke a na - ebute obere oku, obere ntụpọ na atụmanya, yana - n’ikpeazụ - obere ahịa. Velocify achọpụtala na iji ihe dị mkpa eme ihe mụbaa oge okwu ụbọchị site na 88% na ntụgharị abụọ!
Ike ịbawanye arụpụta abụghị naanị imechi ngwa ngwa, ndị anyị na ha ga - arụ ọrụ Ahịa achọpụtala na ntinye aka buru ibu na-achọ ogologo oge ịzụ ahịa na isi ihe na-emetụkarị. Ọ bụrụ na ndị ahịa gị niile na-emechi emechi ụzọ dị ọkụ, ụlọ ọrụ gị na-efu nnukwu nkwa ndị na-anaghị eme listi ọrụ! Ndu akara, oge oku na oge nzaghachi niile dị oke mkpa maka mmechi mmechi.
Nọmba ndị a bụ ihe efu. Ebumnuche akpaaka na-egosi oge na oge iji nyere ụlọ ọrụ aka ịba ụba ego ha na-enweta. Nke a bụ Velocify's infographic nke na-egosi ihe kpatara ịhapụ ụfọdụ bọọlụ na ikuku kwesịrị ịgba ume. Nwere ike ibudata akụkọ zuru ezu, Ike nke Ibu ụzọ.
Tags: ndu akaramulti-taskingHazieire ahia isiire ahịa ọtụtụmkpa ahịaakaragbaa ọsọ